Misy fiarovana ao amin'ny 3D pirinty herinaratra fiara? Ve ianao sahy hanokatra azy io? - China Cixi Lanbo Pirinty natao
Misy fiarovana ao amin'ny 3D pirinty herinaratra fiara? Ve ianao sahy hanokatra azy io?
3D fanontam-pirinty dia mifototra amin'ny teknolojia nomerika modely, mampiasa ny fitaovana bondable toy ny vovo-metaly na plastika mba pirinty ny firafitry ny zavatra sosona ny sosona. Ity dia manana fangatahana teknolojia eo amin'ny sehatry ny firavaka, kiraro, orinasa famolavolana, fanorenana, injeniera sy ny fanorenana, fiara, aerospace, sy fitsaboana nify.
Tamin'ny volana Novambra 2010, izao tontolo izao ny fiara voalohany urbee pirinty tamin'ny printy 3D nivoaka. Vao haingana, Italiana herinaratra mpanamboatra fiara XEV dia nanambara fa izany dia miara-miasa amin'ny Shina printy 3D polymake orinasa fitaovana mba hamokarana herinaratra fiara 3D pirinty LSEV, izay izao tontolo izao no ho voalohany faobe-pirinty 3D vokatra herinaratra fiara. Ny orinasa mpamokatra entana fiara tsingerin'ny ity dia mikasika ny Tamin'ny 3 andro, ny fiara manana hafainganam-pandeha ambony ny 43 mph, tokana fiampangana ho 93 kilaometatra, ary feno fiara afa-tsy milanja 450 kg.
Mazava ho azy fa ny Honda Japana vao haingana ihany koa ny nanorina iray fanaovam-panavotana herinaratra fiara, ny vatana dia efa ahitana 3D pirinty kobany, ary izao no tena ampiasaina mba handefa mofomamy, fa Honda nilaza fa ny modely no mety ho an'ny famokarana faobe. Na dia tsy misy fanahafana manokana antontan-kevitra ho an'ny 3D pirinty herinaratra fiara, indrindra fa ny fiarovana antontan-kevitra, toy ny mahasoa ny teknolojia, dia mety ho teknolojia mihitsy aza, mba hanimbana ny orinasa. Tokony hanana saina misokatra ny hanaiky azy io. Avy ankehitriny 3D pirinty herinaratra fiara, dia mivangongo ao amin'ny miniaturization sy ambany-haingana saha. Mino aho fa hisy tahirin-kevitra manan-danja ao amin'ny 3D pirinty herinaratra fiara ao amin'ny manaraka 1-2 taona, toy ny fiarovana sy ny operability ny fiara. , Fampiononana sy ny maro hafa. Ny 3D pirinty herinaratra fiara dia mbola ao ny fahazazany, ary hisy fitsipika sy ny tatitra momba ny fiarovana fitsapana sy ny mitaingina traikefa manaraka ireto fiara, ka ny fiara natoky ny mpanjifa dia hanana ny tsena, ka izany any aoriana any, 3D pirinty herinaratra fiara ho avy. Arakaraka penitra. Raha ny marina, ny mpanoratra dia tsy mampaninona hanokatra 3D pirinty herinaratra fiara, raha izany 3D pirinty herinaratra fiara ambany ny vola lany, ny fiarovana azo antoka, ary afaka hihaona ny fiara mila nahoana no tsy hanandrana azy!